विश्वभर यति बेलाकोरोना संक्रमणको स्थितीभयावह छ । मौसम परिवर्तनको समय भएकाले यो समयमाप्रत्येक बर्ष रुघाखोकीको समस्या देखिने गर्छ । साथै चाडपर्व नजिकिदैँ गर्दा जीवन शैलीमास्वास्थ्य सुरक्षाका चुनौतीहरु थपिन सक्छन् ।
कोरोना संक्रमितहरु दिनप्रतिदिन ठूलो संख्यामाथपिदैगएको अवस्थामामौसम परिवर्तन सँगै रुघाखोकी लाग्दा पनि कोरोना संक्रमण भयो कि भनेर त्रसित हुनेको संख्या धेरै छ । रुघाखोकी र कोभिडको लक्षण प्राय मिल्दो जुल्दो भएकाले सामान्य रुघाखोकीकाकारण देखिने लक्षणहरुमा पनि मनोवैज्ञानिक रुपमा आतंकश्रृजना हुनसक्छ । मानिसहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर हुँदा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतागुमाउन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
मौसम परिवर्तन तथा कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिदैँ गएको अवस्थामा कस्तो जीवनशैली अपनाउने त? यसै सन्दर्भमा बुटवल कोरोनाविशेष अस्पतालका फोकल पर्सन तथा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका डा. सुदर्शन थापासँगखसोखासकर्मी सुरज घिमिरेले गरेको कुराकानी ।
सामान्य रुघाखोकी र कोरोना संक्रमण कसरी छुट्याउन सकिन्छ ?
पछिल्लो समय मुलुकभर कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएको बेला सर्वसाधारणलाई कोरोना संक्रमण र रुघाखोकी छुट्याउन अप्ठ्यारो परेको देखिएको छ । रुघा, खोकी र सामान्यज्वरो आउदैमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण भन्ने सोच्नु हुँदैन । मौसम परिवर्तनको समय भएकोले सामान्य रुघाखोकी र सामान्य ज्वरो आउनु स्वभाविक नै हो ।
कोरोना संक्रमण हो किमौसमी फ्लुले भन्ने ज्वरो र खोकी कसरी आइरहेको छ भन्ने ख्यालगर्न सके सजिलै थाहापाउन सकिन्छ । मौसमी फ्लुमालाग्ने र कोरोनामालाग्ने खोकीमानिकै भिन्नता रहेको छ ।
मौषमी फ्लुकाकारण रुघाखोकीलागेमात्यति कडा हुँदैन । नाकबाटपानीबग्ने, सामान्यहल्काज्वरो आउने, हाँच्छ्यु आउने हुन्छ । त्यसैले यस्तो बेला धेरै आत्तिनुपर्दैन । मौसमी रुघाखोकीकाकारण नाक टालिने र सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ । हुन त कोरोनामापनि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ तर रूघामा जसरी नाक टालिदैन ।
त्यसैगरी सुख्खाखोकीलाग्नु, स्वाद र गन्धथाहानपाउनु, ज्वरो आउनु, घाँटी अलिकस्सिएको, भारी भएको, थकान महसुस हुने लक्षण कोरोनाभाइरसको शंकागर्न सकिन्छ । कोरोनाको खोकीएकदम सुख्खा हुन्छ । जतिखोक्दापनिकफआउँदैन । तर अरू मौसमी रुघाखोकीमामज्जाले खकार आउँछ ।
परीक्षण नगरी पनि कोरोना पत्ता लगाउन सकिन्छ ?
हामीले घरमा बसेर परीक्षण नै नगरी कोराना पत्ता लाग्ने भन्ने होइन, जानकारी राख्न सकिने कुरा मात्रै हो । लक्षणहरु मात्र हेरेर कोरोना छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन । कोरोना संक्रमण हो, होइन भन्ने कुरा थाहा पाउन पीसीआर परीक्षण अनिवार्य हुन्छ । यद्यपी टाउको, जिउदुख्ने, खानाखान मन नलाग्ने जस्ता लक्षण पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाका कारण आएको ज्वरो दुई चार दिन रहन्छ । मौसमी फ्लु हो भने अझै लामो समयसम्म आइरहन सक्छ । कोरोनाको ज्वरो अलि कडा हुन्छ । त्यस्तो बेला मानिसले बढी जाडो महशुस गर्छन् । अर्थात कोरोना लागेको व्यक्तिलाई कम ज्वरो आउने हुन्छ ।
तर मौसमी फ्लुको ज्वरो त्यस्तो कडा हुँदैन । फ्लुका कारणले लामो समयसम्म ज्वरो आएपनि कडा ज्वरो भने आउँदैन । अर्थात शरीर काम्दैन । कोरोनाको लक्षण १४ दिन सम्ममा पनि देखिन सक्छ । तर फ्लुको लक्षण तीन दिनमा देखा पर्न थाल्छ । त्यसैले कहिलेदेखि लक्षण देखा पर्न थाल्यो भने स्वयंले विचार गर्नुपर्छ । यसरी कामज्वरो आयो र दुई–चार दिनसम्म मात्र रह्यो भने त्यो कोरोना हुन सक्छ । यस्तो बेला तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ । कोरोनाभन्दा फ्लुमा बढी जिउ दुख्ने, थकान महशुस हुने र खान मन नलाग्ने गर्छ । साथै लक्षण पनि फ्लुमा छिटो देखिन्छ । कोरोनामा भने विस्तारै देखिन्छ ।
मौसम परिवर्तनसँगै मानिसमा रुघाखोकीका लक्षण देखिएका छन्, उनीलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
कोरोनाभाइरसको लक्षण पनि अन्य फ्लुसँग मिल्दोजुल्दो भएकोले मानिसहरूलाई शङ्कालाग्नु स्वभाविक हो । रुघाखोकी लाग्दैमा कोरोनाभाइरसको शंका गर्न हुँदैन ।
मौसम परिवर्तनसँगै रुघाखोकीको समस्या देखिनु स्वभाविक भएकोले त्यस्तो बेला घरेलु उपचार गर्न सल्लाह दिन्छु । तातो पानी अनिवार्य पिउनुहोला । रुघा लागेका व्यक्तिको नजिकवा मुखामुख हुने गरी बस्नु हुँदैन । रुघा संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सरसामान र लुगाको सकभर प्रयोग नगर्नुहोला । कोरोना र रुघाबाट जोगिन मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोला । साथै भिटामिन सीले शरीरको रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँने भएकोले अमला, कागतीजस्ता भिटामिन सी भएका र मौसमी फलफूलको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
चाडवाड पनि नजिकिँदै छ, दैनिक जीवन र खानपानलाई कसरी ख्याल गर्न सकिन्छ ?
मौसम परिवर्तनसँगै हाम्रौ दैनिकक्रियाकलापहरुलाई पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । खानपान तथा दैनिक कामकाज गर्दा सबैले स्वास्थ्यको ख्याल राख्न जरुरी छ । शारीरिक सरसफाई तथा वातावरणीय सरसफाई अत्यावश्यक चीज हुन् । रुघाखोकी लाग्दैमा सुरुमा कोरोना नै सोच्नुपर्छ भन्ने जरुरी रहेन । मौसम परिवर्तन भइरहेको छ । मनमात्रास नलिऊँ । सावधानी अपनाइ राख्यौं, कसरी सर्छ भनेर जान्यौं भने बच्न सकिन्छ ।
नेपालीहरुको चाड दशै, तिहार, छठ लगायतका पर्वहरु दैलो अगाडि आइसकेको भएपनि विगतका वर्षमाजस्तो यो वर्षको माहोल छैन । सकेसम्म कोही पनि घर बाहिर ननिस्कौं, यदिनिस्कनै पर्ने भए अनिवार्य मास्क तथा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरौं ।
विशेष गरी यो वर्षको दशैं आफ्नो घर परिवार भित्रै ठूलो जमघट नगरी मनाउन सल्लाह दिन चाहान्छौं । नेपाल सरकारले भने अनुसार नै हामीजो जहाँ छौं सोही ठाउँमा बसेर पर्व मनाऔं । सबै भन्दा ठूलो हाम्रो जीवन हो, जीवन रह्यो भने हामीले जे पनि गर्न सक्छौं । त्यसैले यो वर्षको दशै अहिलेकै ठाउँमा बसेर मनायौं भने तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाऔं भने आगामी दिनहरु हाम्रै हुन् । सुरक्षित रहौं, सतर्कता अपनाऔं, आतंकित नबनौं ।
नेपालमा थप १३४३ जनामा कोरोना पुष्टि, १३ को मृत्यु
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ३४३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य